Embassy of The Republic of The Union of Myanmar » Declarations » Page: 30
Changing Checkpoints of Thailand into Border Gateways
by Admin on 02/09/2013 at 5:53 PM
Please download attachment for more details.
For Myanmar Version, download HERE.
နိုင်ငံတကာ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ရည်ရွယ်၍ Electronic of Origin System (eco) စနစ်ကိုဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း
by Admin on 09/08/2013 at 9:24 AM
Repulic of the Uion of Myanmar Press Release No. 10/2013
by Admin on 31/07/2013 at 9:40 AM
Report on Press Conference of Central Comittee for Rakhine State
by Admin on 16/07/2013 at 5:15 PM
Download HERE for Myanmar Version.
Download HERE for English Version.
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်၍ ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားသူ လုပ်ငန်းရှင် များအနေဖြင့် မိမိတို့ဆောင်ရွက်လိုသည့် ကိစ္စအရပ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည့်အချက် များအား အောက်ပါလိပ်စာများအတိုင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း အသိ ပေးအပ်ပါသည်-
လာရောက်၍ ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားသူ လုပ်ငန်းရှင် များအနေဖြင့် မိမိတို့ဆောင်ရွက်လိုသည့် ကိစ္စအရပ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည့်အချက် များအား အောက်ပါလိပ်စာများအတိုင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း အသိ ပေးအပ်ပါသည်-
(က) ဦးအောင်နိုင်ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဖုန်း – ၉၅-၆၇-၄၀၆၁၂၂၊ ဖက်စ် – ၉၅-၆၇-၄၀၆၁၂၃
e-mail : majanoo@gmail.com
(ခ) ဒေါ်ချိုချိုဝင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဖုန်း – ၉၅-၆၇-၄၀၆၃၄၂၊ ဖက်စ် – ၉၅-၆၇-၄၀၆၃၄၄
e-mail : chochowynn2011@gmail.com
(ဂ) ဦးမျိုးမင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း – ၉၅-၆၇-၄၀၆၁၇၄၊ ဖက်စ် – ၉၅-၆၇-၄၀၆၂၀၈
e-mail : myomin.dec1976@gmail.com
(ဃ) ဒေါ်တင်အေးဟန်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း – ၉၅-၆၇-၄၀၆၀၇၅၊ ဖက်စ် – ၉၅-၆၇-၄၀၆၃၃၃
e-mail : tayehan@gmail.com
ထို့အပြင် ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ သိရှိလိုသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ website: www.dica.gov.mm တွင်လည်း ရယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအကြောင်း ကြား အပ်ပါသည်။